Isikhokelo sokuGqibela kwi-White Willow Bark Extract forisindo
Februwari 29, 2020
1. Yintoni i-White willow bark ekhutshwayo?
The Mhlophe Willow Bark Isicatshulwa kudala isetyenziswa kangangeenkulungwane ekunyangeni isikhumba esicaphukisayo, njengoko kusaziwa ukuba sinesalicin.
Le khompawundi inamachiza emzimbeni ukuze ivelise i-salicylic acid. Iasalliclic acid sisithako esiyintloko se-aspirin. Sisithako esisebenzayo esinezinto ezinamandla zokulwa nezifo kunye nonyango. Ngenxa yeempawu zayo ezinamandla, i-Willow Bark Extract ihlala isetyenziswa njengamayeza abantu xa kusiziwa ekunciphiseni kwentlungu nasekunyangeni usulelo.
Malunga ne-1800s, iqela leemichiza lifumene indlela yokuvelisa isalicylic acid, abayibiza ngokuba yiacetylsalicylic acid.
2. I-White Willow Bark Extract Use
Nazi eziphambili I-White Willow Bark Extract Use:
Ukuphatha Ubuhlungu Emva
Enye yezona zinto ziphambili zisetyenzisiweyo ukusebenzisa i-white willow bark kukunyanga iintlungu kumqolo ongezantsi kwaye inokusebenza ngakumbi ukuba uyithatha kwiidosi eziphezulu. Nangona kunjalo, uyakuqaphela kuphela ukuphuculwa okubalulekileyo emva kweveki yokusebenzisa.
Inceda ngokuthoba umzimba
Izifundo zokuqala ziphakamise ukuba ukuthatha i-willow bark bark kunye ne-cola nati kunye ne-ephedra kunganceda ekulahlekeni kwesisindo. Yiyo loo nto enye yamaphepha amhlophe emilambo esetyenziselwa ukunceda abo batyebileyo nabanamafutha ngokweqile ukuba baphose iipawundi.
Kodwa kuya kufuneka ulumke kakhulu ngokusebenzisa olu dibaniso ngenxa yomngcipheko wokhuseleko ekusebenzeni kwe-ephedra. Ngapha koko, ivinjelwe e-US ngenxa yeziphumo eziyingozi kakhulu eziza nayo.
Olunye uphononongo lubonisa ukuba ukukhutshwa kwe-willow bark kunokunceda ukunyanga i-osteoarthritis kodwa iziphumo zezi zifundo ziphikisana.
Olunye uphononongo lubonisa ukuba inokunceda ukunciphisa iintlungu kodwa ezinye izifundo zathi azinampembelelo.
3. I-White willow bark ikhupha izibonelelo
Uninzi lwe ibrown willow bark ikhupha izibonelelo unento yokwenza namandla ayo okuphelisa iintlungu. Iimpawu ezinceda ekunciphiseni iintlungu kunye nefiva zokuphelisa i-willow bark yakhutshwa kwangoko kwinkulungwane ye-4 eGrisi. Konke kwaqala xa iqela labasebenzisi abangamaGrike bahlafuna ibhungane kwaye bafumana isiqabu ngokukhawuleza kwintlungu.
Ngabantu abaninzi nangakumbi abaphendukela kumayeza endalo kwezi ntsuku, kuye kwakho inzala ehlaziyiweyo ekusetyenzisweni kwegxolo lomngxunya njengamayeza. Abantu abaninzi banokuyibona njengeyona ndlela ikhuselekileyo yokufumana ii-NSAIDs, ezinjengeIbuprofen, iNaproxen, neAspirin.
Abaqeshi bonyango olunolunye bathi ibango le-willow bark linokunyanga zonke iintlobo zokuphazamiseka kwentlungu, ukusuka kwisifo samathambo, isifo samathambo, iintlungu zamadolo, iintlungu ezisezantsi ngasemva, nentloko ebuhlungu. Abanye baye babanga ukuba kuyabanceda ukunciphisa umzimba ngokufezekileyo.
Kwaye njengokusebenzisa nje naluphi na ukongezwa kwemichiza, ezo ziqwenga zobungqina ezixhasa ibango lokusebenza kwegxolo lomngxunya ziyaphikisana. Kodwa makhe sihlolisise izifundo ezahlukeneyo zokukhupha i-willow bark.
Kukho izifundo ezijolise kwiziphumo zokungqubeka kwamakhonkco kubantu abanesifo samathambo. Kodwa ezi zifundo zivelise iziphumo ezichaseneyo. Kwilingo elinye leklinikhi, elapapashwa kuPhando lwePhytotherapy, abantu abangama-78 bacelwa ukuba basebenzise isiciko se-willow bark esine-240 mg yealicin mihla le.
Kwakukho elinye iqela le-placebo. Omabini la maqela abantu ayephethwe sisifo samathambo. Emva kweeveki ezimbalwa zonyango, abo beliqela lama-willow bark banenqaku le-14% lentlungu xa kuthelekiswa ne-2% kuphela yeqela le-placebo.
Nangona kunjalo, oku akuzange kube sisiphumo esibonwe kwisifundo seeveki ezi-6 ezipapashwe kwiJenali yeRheumatology. Ngexesha lokuvavanywa, abaguli be-127 abanesifo se-osteoarthritis bacelwa ukuba bathathe i-240 mg ye-salicin. Abanye bacelwa ukuba bathathe i-100 mg ye-diclofenac, kunye nokuphumla yayiyi-placebo.
Icandelo lesibini lesifundo lityhile ukuba i-willow bark ayisebenzanga ekunyangeni iintlungu eziziswa sisifo samathambo xa sithelekiswa ne-placebo.
Ubungqina obukhoyo ngoku bubonisa ukuba i-willow bark isenokungabi njalo esebenzayo kunyango lweentlungu eziqatha kumqolo ongezantsi.
Uhlalutyo lowama-2016, olupapashwe kwiJenali Spine, luye lwavavanya izifundo ezili-14 ezipapashiweyo ekusebenziseni iyeza lamayeza ukunyanga iintlungu ezisezantsi. Phakathi kwezinto ezifunyenweyo, iqela labaphandi libike ukuba ixolo lomthi womngcunube omhlophe, owaziwa ngokuba yiSalix Alba, ubonelele ngokungapheliyo kwintlungu xa kuthelekiswa ne-placebo.
Ngokuhambelana noko, umgangatho opheleleyo wezifundo eziye zaqwalaselwa zithathwa njengezingekho mgangathweni-mgangatho. Uphando olongezelelekileyo luyafuneka ukugqiba ukuba ingaba lusebenza kangakanani okanye lukhuseleke njani uxolo lwe-willow ekunyangeni intlungu yomqolo ongezantsi.
Ukukhupha i-bark yemilando kuye kwafunyanwa ukunceda ukunciphisa iintloko. Obunye ubungqina bucebisa ukuba, xa uthelekisa namanye amayeza okunyanga iintlungu, anjenge-ibuprofen, ukuveliswa kwe-bark engaphantsi komngcipheko kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga zesisu.
Nangona kunjalo, ezi zifundo azivelanga ngaphandle kwamathandabuzo onke. Ke, abantu abachaphazeleka kukuqaqanjelwa sisisu kufuneka banqabe ukuthatha i-willow bark ukuze bafumane unyango. Izifundo ezikhulu ezikhulu ziyafuneka ukuze kufunyanwe ukuba isebenza njani okanye ikhuseleke njani na umngxunya womthi womngxunya ekunyangeni iintloko ezingapheliyo neziphindaphindiweyo.
I-bark yemoward iyathengiswa kwiminyaka embalwa edlulileyo njengesixhasi esisebenzayo sokunciphisa umzimba. La mabango ezempilo asisiphumo sophando lwakuqala yayiyi-willow bark yahlanganiswa kwi-ephedra ukwenzela ukuphucula ukwenziwa kwemidlalo kunye nokutshisa amanqatha.
I-Ephedra, neqhele ukusetyenziswa kumayeza amaTshayina, yavalwa ukuba isetyenziswe e-US ukusukela ngo-2004 ngenxa yezehlo ezahlukeneyo zokufa kwentliziyo kubasebenzisi bayo. Kodwa xa kuthathwa yonke iyodwa ngaphandle kwe-ephedra, the amagqabi emisonto emhlophe ukunciphisa umzimba akunampumelelo.
Izifundo ezininzi zibonise ukuba i-willow bark isebenza ngakumbi ekunciphiseni iintlungu eziziswa yi-osteoarthritis xa ithelekiswa ne-placebo.
Kwisifundo esinye esineqela labantu abanengxaki ye-osteoarthritis kwaye baziva iintlungu kumqolo ongezantsi nentamo, abo banikwa i-willow bark baye bafumana ukuphuculwa okukhulu kwiimpawu zabo xa kuthelekiswa neqela le-placebo.
Uphononongo olufanayo lwenziwe kwiqela labantu abangama-78 abafunyaniswa benesifo seengcongconi kwaye kufuneka bajongane nentlungu enkalweni yabo okanye edolweni, ifumanise ukuba abo banikwe i-willow bark baye bafumana isiqabu esibalulekileyo xa kuthelekiswa neqela le-placebo.
4. I-White Willow Bark Extract Dosage
Akukho sikhokelo sanikezelwa malunga nokufanelekileyo i-White willow bark ekhupha i-dosage. Kodwa ngokubanzi, idosi eyi-400 mg yonke imihla kufuneka ikhuseleke. Oku kufuneka kuthathwe ngomlomo kwaye kufuneka kube nakho ukubonelela ngokuphumelelayo isiqabu kwintlungu edibeneyo okanye yemisipha.
Izongezelelo zegxolo lomngxunya ezithengiswa ezivenkileni zihlala ziza ngendlela yeepilisi. Ungabanceda bakhuphele kwiicoci zolwelo okanye kwifom yomgubo. Ezinye iinkampani zibuye zivelise ioyile ephezulu eyenziwe ngewoward bark enokufakwa ngqo ekunciphiseni iintlungu. Kukho i-seramu ezisekwe kwioyile kodwa zenzelwe ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela.
Igxolo le-willow ngokwalo linokuziswa zii-chips okanye iidosi. Oku kusetyenziswa ekwenzeni i-tinctures kunye neti.
5. I-White Willow Bark Extract isetyenziselwa ukuthoba umzimba
Yintoni eyona nto ibalulekileyo nge-White willow bark kukuba iziphumo zayo zinokuhlala ixesha elide xa kuthelekiswa ne-aspirin kwaye kungenxa yesi sizathu ke kongezwa kwi-burners yamafutha.
Inokunceda ukwandisa imiphumo yokulahleka kwesisindo kwimveliso, ngakumbi ukuba uyisebenzisa kunye nezinye izithako. Umzekelo, i-willow bark inokunceda ukwandisa imisebenzi yezithako ezithile ze-thermogenic kwisongezelelo sokulahleka kwamafutha ngaloo ndlela yandisa amandla ayo okutshisa amafutha.
Umthamo ofanelekileyo we-bark yemoward emhlophe ujikeleze kwi-120 - 240 mg. Njengoko sele kukhankanyiwe, i-herb inento yokwenza neekhemikhali eyaziwa ngokuba yi-salicin, enoxanduva lobuchule bayo obunamandla. Kodwa ngokungafaniyo ne-aspirin enokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezimbi kakhulu xa ithathwa ngamanani amakhulu, i-White willow bark ikhuselekile ngokuphelele.
6. IWhiteowow Bark yokuGxotha isetyenziselwa ukunceda ukukhusela ulusu
Abantu abaninzi baxhomekeke ku amagqabi emisonto emhlophe ukukhupha kunyango lolusu. Kolunye uphando olwenziwe ngo-2010, kwafunyaniswa ukuba i-salicin inokunceda ukunciphisa ukuguga kwesikhumba. Iqela labaphandi lizamile ukusebenzisa i-serum equkethe i-salicin ebusweni babafazi abaphakathi kweminyaka engama-35 nama-70 yonke imihla ngosuku olunye kwiiveki ezili-12 ezilandelelanayo.
Iziphumo zabonisa ukuphucuka okukhulu kwinkangeleko yokukhanya kwabo. Kodwa esi sisifundo sokuqala kwaye uphando oluthe kratya luyafuneka ukuze uqonde iimpembelelo zesalicin kulusu. Kodwa ukuza kuthi ga ngoku, iziphumo ziyakhuthaza.
I-bark yemoward iye ifunyanwe ukuba iyasebenza ekukhuseleni ulusu kunye nokucoca iipores, kubangele ukubukeka okunempilo kunye nokuncinci. Inokunciphisa iipores ezixineneyo, ezithintela imigca emihle kunye nemibimbi. Ukusetyenziswa rhoqo kunokukhokelela kulusu oluthambileyo, olucacileyo nolusu oluthambileyo.
7. Ngaba lukhona uNxibelelwano lweZiyobisi?
I-bark yemoward ifunyenwe ukuba icothise ukubambezeleka kunye nokopha ixesha elide. Ngenxa yale nto, akunakucetyiswa ukuba uthathe kunye ne-anticoagulants efana ne-warfarin kunye neziyobisi ze-antiplatelet njenge-clopidogrel. Kufuneka ingathathelwa kunye namayeza okopha, kubandakanya ii-NSAIDs.
Ukuba ucwangciselwe ukwenza utyando, kuya kufuneka uyeke ukuthatha i-willow bark okungenani kwiiveki ezimbini ngaphambi komhla ocwangcisiweyo wotyando lwakho ukwenzela ukuthintela ukopha kakhulu. Kufuneka ingasetyenziswa yi-hemophiliacs okanye abo banengxaki yokuphalaza.
I-FDA yaseMelika ayifuni izongezo zokutya ezinjenge-willow bark ekhutshwe phantsi kovavanyo lwesiqhelo. Kungenxa yesi sizathu kutheni umgangatho weenowuthsi ezongezelelekileyo zazahluka ukusuka kumenzi ukuya kwenye.
Ukongeza, kuphela ngabakhiqizi abambalwa abanokungenisa ngokuzithandela izongezelelo zabo ukuba bahlolwe yi-US Pharmacopeia kunye namanye amalungu oqinisekiso.
8. Isicatshulwa seWillow White Bark siyathengiswa
Xa u Thenga i-White willow bark khupha, thatha ixesha lokwenza uphando lwakho. Uya kufumana okuninzi kukhutshwa ixolo lomthi elimhlophe kwi-intanethi.
Kodwa kuya kufuneka ujongane kuphela nomenzi othembekileyo onedumela lokuvelisa izixhobo ezikhuselekileyo nezisemgangathweni ophezulu. Ukuba kunokwenzeka, khetha ezo mveliso ziqinisekisiweyo yi-US Dept. yezoLimo okanye i-USDA.
9. Ungayithenga phi i-White Willow Bark Extension Powder in Bulk?
Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa i-white willow bark ixesha elide, iya kuba yinzuzo yakho ukuba Thenga i-White willow bark ekhupha umgubo ngobuninzi. Oku kuya kukugcinela imali kuba ungazifumana kwinqanaba lesaphulelo ukuba uya kuzithenga ezi mveliso ngesixa esikhulu.
Kodwa emva koko, qiniseka ukuba ujongene nokuthembekileyo kuphela umthengisi okhuphele emgangathweni omhlophe Ukuqinisekisa ukuba ufumana iimveliso eziyinyani.